မျက်နှာပြင် - ကီးဘုတ်သည် desktop mode တွင်အလိုအလျောက်စတင်သင့်သည်
နေအိမ်/Windows ကို 10/မျက်နှာပြင် - ကီးဘုတ်သည် desktop mode တွင်အလိုအလျောက်စတင်သင့်သည်
Windows ကို 10ညွှန်ကြားချက်
Vangelis5 ။ ဧပြီလ 2020
Surface နဲ့ အလုပ်လုပ်ပါသလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ပြဿနာကို သေချာသိမှာပါ။ Windows 10 ကို တက်ဘလက်မုဒ်တွင် အသုံးပြုပါက၊ သင် ခလုတ်တစ်ခုသို့ တစ်စုံတစ်ခုကို ရိုက်ထည့်သည့်အခါ ကီးဘုတ်သည် အလိုအလျောက် စတင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သာမန် Windows 10 ဒက်စ်တော့မုဒ်တွင် ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ ၎င်းကို သင်မည်ကဲ့သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလမ်းညွှန်ချက်များကို သင့်အား ပြသပါမည်။
Surface Keyboard သည်အလိုအလျောက်စတင်သင့်သည်
အကယ်၍ မျက်နှာပြင် မပါပါ တက်ဘလက်ပုံစံ သင်သုံးရမည် ကီးဘုတ် manual တစ်ခုခုရိုက်ထည့်ပါ။ ဒီလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ B. သင် ၀ က်ဆိုက်ကို address bar တွင် ၀ င်လိုသောအခါ browser တစ်ခုတွင် ဒါကအရမ်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်။ အိုင်ပက် နှင့်အခြား tablets အဲဒါကိုဖျက်တာပိုကောင်းတယ်။
ဒါဆိုရင်မင်းလိုချင်တယ် မျက်နှာပြင် desktop mode တွင်သုံးသော်လည်းကီးဘုတ်ကမစပါ။ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ရှိနေတယ် Microsoft က ကီးဘုတ်သည်အလိုအလျောက်စတင်နိုင်သည့် function တွင်ပါ ၀ င်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့်၎င်းကိုကိုယ်တိုင်အသက်သွင်းရန်လိုသည်။
စတင်ပါ setting များကို ၏ Windows ကို 10 သင်ဖြတ်လမ်းကီးကိုနှိပ်ပါ Windows ကို + I နှိပ်ရန် တနည်းအားဖြင့်၎င်းကိုနှိပ်ပါ Windows သင်္ကေတ system tray တွင်ကျန်ခဲ့ပြီး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။ setting များကို.
ဖွင့်ထားသော window တွင်ဘယ်ဘက်ကိုနှိပ်ပါ input ကို
ညာဘက်ပြတင်းပေါက်၌သင် function ကိုအချက်အလတ်ကိုတွေ့လိမ့်မည် မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိကီးဘုတ်
slider ကိုညာဘက်သို့ရွှေ့ခြင်းဖြင့်ဤ option ကိုသက်ဝင်စေပါ "တက်ဘလက်မုဒ်ကိုဖွင့်မထားပါနှင့်ကီးဘုတ်မချိတ်သောအခါမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိကီးဘုတ်ကိုပြပါ"။
ယခု function ကို activated ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုသင် Windows (သို့) browser ကဲ့သို့ software တစ်ခုခုကိုရိုက်ချင်သောအခါကီးဘုတ်သည်အလိုအလျောက်စတင်သည်။
Windows 10: Windows ဓာတ်ပုံကြည့်သူအဟောင်းကိုတစ်ဖန်ပြန်အသက်သွင်းပါ၊ ဒါကဒီမှာပါ
Windows Defender အကြောင်းကြားချက်များကိုပိတ်ထားပါ
Windows 10 တွင် system information ကိုပြပါ
Windows 10 Mail အက်ပလီကေးရှင်းကိုအီးမေးလ်တပ်ဆင်ပြီးအကောင့်များစွာကိုတစ်ချိန်တည်းသုံးပါ
Outlook သည်မစဘူး၊ အလုပ်မလုပ်ဘူး၊ အဖြေရှာတယ်
Windows7တွင် system repair disc ကိုဖန်တီးပါ
Windows 10 ပြဿနာအစီရင်ခံခြင်းကိုပိတ်ပါ
PC တိုင်းတွင်တူညီသော Windows နောက်ခံပုံ
Firefox 68 - Add -on Manager တွင်အကြံပြုထားသော extensions များကိုဖယ်ရှားပါ
Metro interface မှ desktop သို့ windows 8 app များ